Dawlada Itoobiya Oo Xabsi Guri Galisay Gudoomiyaha Ururja OLNF. – Awdalmedia
Guddoomiyaha Ururka OLF Dawid Ibsaa ayaa sheegay labadii isbuuc ee ugu dambeeyey iney dowladda xabsi guri gelisay isla-markaana ay ka xirtay taleefankiisa gacanta.
Gudoomiyaha oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi. “Ciidamada xabsi guriga igaliyay markii ay ii yimaadeen waxa aan waydiiyay waxa ay iga rabaan waxay ii sheegeen iney amnigeyga u baqayaan oo ay ilaalinayaan ammaankayga, runtii hadalkooda waan aaminay, balse markii dambe ayey xaaladdu isbeddeshay, waxayna Jimcihii shalay ii sheegeen inay gurigeyga qofna uu geli karin qofna uu ka bixi karin”
Isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “Galabnimidi Jimcaha ayaa la iga jaray taleefankeygi gacanta ee aan aniga gaarka u lahaa, ciidamada gurigyga isku hareereeyey waxaan ogaaday inay ka socdaan dowladda dhexe, waxaan ku ogaaday tuutaha federaal booliska ee ay xirnaayeen.”
Dowladda dhexe ee Itoobiya ayaana ilaa imika ka hadal warka ka soo yeeray guddoomiyaha ururka OLF, balse wuxuu horay Ra;isal wasaaraha dalka Itoobiya uu sheegay dhibaatooyinka dalka Itoobiya ka dhacayo inuu ka dambeeyo ururka OLF garabkiisa ubeysan ee duurka ku jira.
OLF ayaa muddo ka badan 40 sana ku jirtay dagaal hubeysan oo ay ku dooneysay in gobolka somaliyada Itoobiya uu ka tashado aayahiisa, balse waxay ugu dambeynta bishi 8-dda Augsut, 2018-kii ay heshiis nabadeed ku kala saxeexdeen Itoobiya iyo OLF magaalada Asmara ee dalka Itoobiya.
Xisbiga ka Taliya DDS Itoobiya Oo la Kulmay Xisbiyada Mucaaridka